सिर्जना सिंह विरुद्ध रामचन्द्रले खोले फायर, देउवा समेत तनावमा ! - Lekh-Patra
सिर्जना सिंह विरुद्ध रामचन्द्रले खोले फायर, देउवा समेत तनावमा !
दलहरू आमनिर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । तर, स्थानीय निर्वाचनको तरंग अझै सेलाएको छैन । स्थानीय निर्वाचनमा भएको घात अन्तरघात प्रकरण नेपाली कांग्रेसभित्र निकै पेचिलो हुँदै गएको छ । भुसको आगो जस्तै भित्रभित्रै फैलिएको कांग्रेसभित्रको कलहलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सतहमा ल्याएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले काठमाडौं महानगरपालिकामा भएको कांग्रेसको पराजय वंशवादको परिणाम भएको प्रतिक्रिया दिएपछि कांग्रेसभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ छ, ‘मैले त्यही बेला भनेको थिएँ, महिला दिने हो भने हरिप्रभा छँदैछिन्, उपमेयरमा राम्रो काम गरेकी थिइन् । पुरुष दिने हो भने तीर्थ डंगोल छँदै छन् । उम्मेदवारी दिँदा नै वंशवादको आधारमा जो दिइयो, जनताले त्यसको सजाय लौरो लगाइदिए नेताको टाउकोमा ।’
वरिष्ठ नेता पौडेलको यो प्रतिक्रिया मिडियामा आएपछि नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सिर्जना सिंहले पनि जवाफ दिएकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर पदमा चुनाव लडेर पराजित भएकी नेतृ सिंहले वरिष्ठ नेता पौडेललाई जवाफ दिँदै भनेकी छिन्, ‘मेरो राजनितीक यात्रा प्रकाशमानले भन्दा तपाईंले पहिला चिन्नुभएको हो, थाहा पाउनुभएको हो, हामी छिमेकी जिल्लावासी पनि हौँ, मेरो बिहेअघि तपार्इं गोरखामा जेल पर्नु हुँदाको समयमा मेरो साथ र सहयोग बिर्सनुभएको हो दाइ ? यो कुरा तपाईंको मुखबाट आउदाभन्दा अली सुहाएन कि दाइ ।’
वरिष्ठ नेता पौडेल र नेतृ सिर्जना सिंहको यो सवालजवाफ झट्ट हेर्दा र सुन्दा सामान्य देखिन्छ, तर यो प्रकरणको मर्म निकै पेचिलो छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले नेतृ सिंहको राजनीतिक पृष्ठभूमि थाहा नपाएका हुन् कि ? बुझ पचाएका हुन् ? उमेर ढल्कँदै गएका कारण कांग्रेस नेता पौडेललाई पुराना कुरा बिर्सने रोग लागेको त होइन ? कि गत १४औँ महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहले गरेको असहयोगको बदला लिन वरिष्ठ नेता पौडेलले मुखको तीतो पोखेका हुन् ? नेपाली कांग्रेस वृत्तमा यतिबेला विविधि प्रश्नहरू उठेका छन् ।
किन आरोप लगाए पौडेलले ?
कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले सिर्जना सिंहको उम्मेदवारीलाई वंशवादको आरोप एक्कासि लगाएका होइनन् । मतगणनामा बालेन्द्र शाहले अग्रता लिनासाथ जो मान्छे भेट हुँदा पनि नेता पौडेलले भन्न थालेका थिए, ‘देख्यौ त वंशवादको परिणाम ?, मैले उही बेला भनेको थिएँ नि ?’ नेता पौडेलले यही जेठ ५ गते आयोजिक कांग्रेसका एक कार्यकर्ताको छोराको ब्रतबन्ध कार्यक्रममा पनि सिर्जना सिंहमाथि सार्वजनिक रूपमै वंशवादको आरोप लगाएका थिए, तर त्यहाँ कांग्रेस निकट पत्रकारहरू मात्रै भएका कारण मिडियामा आएन । तर, केही दिनपछि पौडेलले टेलिफोन गरेरै वंशवादको आरापलाई बाहिर ल्याए । आखिर किन यो कुरा बाहिर ल्याए पौडेलले ? पौडेलको यो प्रतिक्रियालाई कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले कसरी लिएका छन् ? के सिर्जना सिंहको राजनीति वंशबाद हो त ? भन्ने तमाम प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।
कांग्रेस नेतृ सिंहले किन चुनाव हारिन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आफ्नो ठाउँमा होला । उनी लौहपुरुष गणेशमान सिंहकी बुहारी र कांग्रेसका पूर्वउपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती हुन् भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ । तर, नेपाली कांग्रेसभित्र सिर्जना सिंहको राजनीतिक पृष्ठभूमि वरिष्ठ नेता पौडेलको भन्दा खासै धेरै कमजोर छैन । उमेरका आधारमा पौडेल सिर्जना सिंहभन्दा करिब २० वर्ष जेठा हुन्, तर नेपाली कांग्रेसभित्रको क्रियाशीलतामा भने खासै ठूलो अन्तर छैन । आफू ०१८ सालदेखिदेखि नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील भएको र ०२४ सालमा पार्टी सदस्यता लिएको पौडेल स्वयंले बताउँदै आएका छन् । यता सिर्जना सिंहले पनि ०३३ सालमा कांग्रेसको सदस्यता लिएकी हुन् । उनी गणेशमान सिंहकी बुहारी तथा प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती बनेको ०४२ सालमा मात्रै हो ।
त्यसैले सिर्जना सिंहको पृष्ठभूमि वरिष्ठ नेता पौडेललाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने हो, तर बुढ्यौलीका कारण पौडेलले पुराना कुरा बिर्संदै गएका त होइनन् ? यो प्रश्न कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सामाजिक संजालमा उठाउन थालेका छन् । कांग्रेसका युवा नेता कृष्ण शर्माले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘महाधिवेशनको तुस अझै रहेछ नेता पौडेलमा, यिनको गुटले सायद सहयोग गरेन, एमालेको त केही नेताले खुलेर नै असहयोग गरेका हुन् ! जसले जे भनोस् काठमाडौंमा सिर्जना सिंह योग्य उम्मेदवार थिइन् तर पार्टी भित्रैका नेताहरूले घात गरेर हराइदिए ! बुढाले निम्न स्तरको वंशवादको आरोप लगाए ! कुण्ठा पोखियो ।’
शंकरप्रताप सिंह महतले लेखेका छन्, ‘पौडेलदाइले यति तल झरेर सिर्जना दिदीको बारेमा टीकाटिप्पणी गर्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । रामचन्द्रज्यु हजुरले आफ्नो छोराछोरी र सम्धीखलकलाई के के पद दिनुभयो हेक्का छ ? सिर्जना वंशजको आधार कसरी हुनुभयो ? उहाँ गणेशमानको बुहारी हो छोरी होइन ।’ राम बस्नेतले लेखेका छन्, ‘रामचन्द्र दाइ, सिर्जना सिंहले त वंशवादका कारण हार्नुभएछ, अनि हजुरले केको आधारमा १७औँ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको एक्लै चुनाव लडदा पनि प्रधानमन्त्री हुन नसक्नु भएको नि ? गत आमनिर्वाचनमा तनहुँबाट किन हार्नुभएको नि ?’
प्रकाश खड्काले लेखेका छन्, ‘यी बाजे नै होइनन् चितवनमा गएर वंशवादकै जीतका लागि कांग्रेसलाई बलि चढाउन धोती खुस्किने गरी बल गर्ने ?’ निर्मला अवस्थीले लेखेकी छिन्, ‘सिर्जनाजी काबिल भएको मान्छे हो । त्यस्तो भन्न मिल्दैन । हारजीत भन्ने कुरा त अहिलेका युवा पुस्तालाई दलहरूले विस्वास दिलाउन नसकेर हो । रामचन्द्र दाइको कुरा अलि अपाच्य, अपरिपक्व, र सिर्जना सिंहको राजनीतिक योगदानप्रतिको अपमान होइन र ?’यसैगरी राम शर्माले लेखेका छन्, ‘मान्छे बुढा हुँदै गएपछि स्मरणशक्ती ह्रास आउँछ । बुढा र बालक एकै हुन् । यसको अर्थ राजनीतिक पार्टी बुढा राखे के हुन्छ भन्ने उदाहरण यो एक हो । बुढा विस्थापित नभएसम्म कांग्रेस मर्म अनुसारको पार्टी हुन्न ।’
नियोजित कि आकस्मिक ?
सरसर्ती हेर्दा कांग्रेस नेता पौडेलको यो आक्रोश गत १४औँ महाधिवेशनका क्रममा उत्पन्न तुषको अभिव्यक्ति हो कि जस्तो देखिन्छ । किनकी नेता प्रकाशमान सिंहकै अडानका कारण आफू सभापति पदमा उम्मेदवार बन्न नपाएको ठम्याइमा पौडेल छन् । तर गणेशमान सिंहको परिवारसँग नेता पौडेलको तुष नयाँ होइन । पौडेलले यसरी प्रतिक्रिया दिनुका कारणहरू धेरै छन् । गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीसँग वरिष्ठ नेता पौडेलको तुष पञ्चायतकालदेखिकै हो ।
०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा भाग लिने कि नलिने ? भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसभित्र गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच तीव्र मतभेद भएको थियो । कोइराला भाग लिने पक्षमा थिए । तर, गणेशमान सिंहले भाग नलिने पक्षमा अडान राखे । यो विवादमा पौडेल गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पक्षमा उभिएका मात्रै होइन, गणेशमान सिंहमाथि दुर्वाच्यसमेत प्रयोग गरेको त्यतिबेलाका जानकारहरू बताउँछन् । जानकारहरूका अनुसार त्यतिबेला पौडेल तनहुँबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा चुनाव लड्ने तयारीमा थिए, तर गणेशमान सिंहका कारण रोकियो ।
०४९ सालमा कांग्रेसभित्र गणेशमान सिंह र कोइराला परिवारबीच तीव्र द्वन्द्व भयो । त्यो द्वन्द्वमा गणेशमान सिंहलाई पार्टीबाट बहिर्गमन गराउन पौडेलको ठूलो भूमिका रहेको बुझाई कांग्रेसजनमा छ । ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनका क्रममा कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको अडियो वक्तव्य प्रकाशित भयो । तर, त्यो अडियो क्यासेट गणेशमान सिंहको नभएर साम्दे शेर्पाको डबिङ भएको भन्दै रामचन्द्र पौडेल देश दौडाहमा निस्के । ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला सभापतिको हैसियतले प्रकाशमान सिंह टिकटको स्वभाविक दाबेदार थिए । त्यतिबेला काठमाडौंमा सात वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । तर, नेता रामचन्द्र पौडेलको दबाब तथा सक्रियतामा प्रकाशमान सिंह टिकट पाउनबाट वञ्चित भए ।
कांग्रेसको १२औँ महाधिवशनमा प्रकाशमान सिंहले महामन्त्रीपदमा चुनाव जिते भने पौडलले केन्द्रीय सदस्यपदमा चुनाव जिते । १३औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा पौडेल अघि सर्ने कि सिंह ? भन्ने बहस चल्दै गर्दा पौडेलले भने, ‘यसपटक म उठ्छु, १४औँ महाधिवेशनमा प्रकाशमान जीको पालो ।’ पौडेलको यो आग्रह प्रकाशमान सिंहले सरक्क माने, तर १४औँ महाधिवेशनमा पौडेलले प्रकाशमान सिंहलाई धोका दिँदै देउवालाई नै पुनः सभापति बनाउने रणनीति अवलम्वन गरे । वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाबाट राष्ट्रपति बन्ने आश्वासन पाएका छन् । उता प्रकाशमान सिंहले पनि देउवाबाट राष्ट्रपतिकै आश्वासन पाएको चर्चा कांग्रेसभित्र छ । सिर्जना सिंहलाई मेयर बनाएर राजनीतिमा पुनर्जीवित गराउने र आफु राष्ट्रपति बन्ने रणनीतिमा प्रकाशमान सिंह भएका हुन सक्छन् । यो कुरा बुझेरै पौडेल सिर्जना सिंहलाई हराउन सतहमै उत्रिएको विश्लेषण पनि धेरैको छ ।अहिले हेर्दा कांग्रेसभित्र देउवा श्रीमान र पौडेल तथा सिंह सौता जस्तो भएको अवस्था छ । पूर्वउपसभापतिद्वय पौडेल र सिंहबीच द्वन्द्व मच्चाउने देउवाको रणनीतिलाई कांग्रेसभित्रको राजावादी तप्काले पनि साथ दिएको अवस्था छ ।
कसरी अघि बढ्ला दाउपेच ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा सिर्जना सिंहको पराजय नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको नयाँ शृंखला हो । बास्तवमा सिर्जना सिंहलाई हराइएको होइन, उनका श्रीमान प्रकाशमान सिंहलाई हराइएको हो । अब ६ महिनापछि हुन गइरहेको आमनिर्वाचन प्रकाशमान सिंहका लागि अझै भारी पर्ने अवस्था छ । सिंहको चुनाव लड्ने भनेको काठमाडौंको क्षेत्र नं १ बाट हो । ०६४ सालदेखि उनले यो क्षेत्रबाट लगातार तीनपटक चुनाव जित्दै आएका छन् । सिंहलाई कसरी अप्ठोरो पर्दै छ त अबको चुनाव ? को को लाग्न सक्लान् उनको खिलापमा ?
परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं–१ बाट अब चौथोपटक चुनाव जित्न भने सिंहलाई सजिलो छैन । सिंहलाई पराजित गराउन काठमाडौंकै रैथाने कांग्रेस नेताहरू पिएल सिंह, तीर्थराम डंगोल र भीमसेनदास प्रधानको गठजोड भइसकेको छ । सिंहको निर्वाचन क्षेत्र भनेको काठमाडौं महानगरपालिकाका १०, ११, २९ र ३१ नम्बर वडाहरू हुन् । जसमध्ये १० र ११ नम्बर वडा टेकु, सुन्धारा, त्रिपुरेश्वर थापाथली हँुदै शान्ति नगरसम्मको कोर एरिया पर्छ । यो एरियामा पिएल सिंह, तीर्थराम डंगोल र भीमसेनदास प्रधानको राम्रै पकड छ । यसैगरी २९ वडा अनामनगर, मैतीदेवी क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा गगन थापाको विशेष पकड छ । गगन थापाले पनि प्रकाशमानको अवशानलाई आफ्नो उन्नति ठानेका छन् ।
३१ नम्बर बडा भनेको बानेश्वर, शान्तिनगर लगायतको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रका मतदाता अराजक छन् । यो क्षेत्रका देउवा समर्थकहरूको राजनीति प्रकाशमान सिंहले सिध्याइदिएका हुन् । त्यसैले यो क्षेत्रका देउवा समर्थकहरूले प्रकाशमान सिंहलाई साथ दिने संभावना छैन । यसैगरी यो क्षेत्रमा कोइराला पक्षको पनि निकै ठूलो पकड छ । निर्णायक अवस्थामा देउवालाई सभापति बनाउन भूमिका खेलेका कारण कोइराला समूहको साथ पनि सिंहले पाउने संभावना छैन । भर्खर सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा प्रकाशमान सिंहको परम्परागत निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने वडाहरूबाट बालेन्द्र शाहले ४० प्रतिशतभन्दा वढी मत पाएका छन् भने, सिर्जना सिंहले २१ प्रतिशत मात्रै मत पाएकी छिन् । यसै गरी केशव स्थापितले १८ प्रतिशत मत पाएका छन् । प्रकाशमानले पाउने भनेको सिर्जना सिंहले अहिले पाएको २१ प्रतिशत मत मात्रै हो ।